Independent contractor or Employee? | U.N.O.B
မိမိလုပ်ငန်းတွင်အခကြေးငွေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသောသူသည်Indepentent Cnotractor လား Employee လား ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေရန် တခါထရံမလွယ်ကူသလို မှားယွင်းစွာဖော်ပြမိပါကလဲ ကြီးမားသောဒဏ် ကြေးပေးဆောင်ရတတ်ပါသည်။
အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်သင်(အလုပ်ရှင်) အနေဖြင့်ဝန်ထမ်းဟု ဥပဒေအရ သတ်မှတ်နိုင်သော သူဧ။် လစာမှ ဝင်ငွေခွန် (Income Tax) social security (ပင်စင်ဟုလွယ်လွယ် ဘာသာပြန်ပါရစေ) နှင့် Medicare (အသက်၊အိမ်ထောင်၊ မိသားစု အခြေအနေ စသဖြင့် ) ပေါ်မူတည်သဖြင့် လစာမှဖြတ်တောက် ထိန်းသိမ်းရပါမည်။
သင်(အလုပ်ရှင်)အနေဖြလဲ SS Tax, Medicare, Unemploymenmt Tax(FUTA &SUTA) အလုပ်ထုပ်ဆိုင်းငံ့ခံရပါက ယာယီထောက်ပံ့သော အခွန်တို့ကို၎င်းဝန်ထမ်း၏ လစာနှုန်းထားအလိုက် ပေးဆောင်ရပါမည်။
အထက်ဖော်ပြပါ အခွန်များကို I.C အတွက် ပေးဆောင်ရန်မလိုပါ။ I.C ဖြစ်ပါက S.E Tax(Self Employment Tax) သာလျှင် ၄င်း person မှ ပေးဆောင်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်ပိုင်သော လုပ်ငန်းတွင် ကျွန်ုပ်သည် I.C လား??
အကယ်ရ်ျ သင်သည် တခြားလုပ်ငန်း(သို့) တခြားသူတဦးဦးအား ဝန်ဆောင်မှု ပေးပါကသင့်ကိုယ်သင် I.C ဟုခေါ်ရ်ျမရ သင်သည် ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်သော လုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ သင်သည် တစုံတယောက်ကို သင့်လုပ်ငန်းတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် အခကြေးငွေဖြင့် ငှားရမ်းပါက ထိုသူသည် I.C လား ဝန်ထမ်းလား ခွဲခြားရမည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် အမှီအခိုကင်းစွာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုပြုကြသော ဆရာဝန်၊ ရှေ့နေ၊စာရင်းကိုင်၊ ကွန်ထရက်တာ၊ စပ်ကွန်ထရက်တာ၊ စကားပြန်တို့သည် အများပြည်သူအား ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။ ထိုသူများအား I.C ဟု အကြမ်းဖျင်းသတ်မှတ်နိုင်သည်။ သို့သော် ၄င်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုအလိုက် ဝန်ထမ်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။
အကယ်ရ်ျ အလုပ်ရှင်တွင် အလုပ်ပြီးမြောက်မှု ရလာဒ်ကိုသာ ညွှန်ကြားနိုင်ပြီး မည်သို့မည်ပုံဆောင်ရွက်ရမည် မည်သည့်အချိန်တွင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဟု ညွှန်ကြားပိုင်ခွင့် တနည်းအားဖြင့် ထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါက ၄င်းတာဝန်ကို ဆောင်ရွက်သော ပုဂ္ဂိုလ်အား I.C ဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
I.C ဟု သတ်မှတ်ရာတွင် အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသည် အလွန်အရေးပါသော အချက်တချက်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိလျှင် ၄င်းအလုပ်ရှင်အလုပ်သမားဆက်ဆံရေးရှိလျှင် ၄င်းထိုသူကို I.Cဟု သတ်မှတ်ရ်ျမရပါ။ ထို့ကြောင့် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားသို့ ပေးဆောင်ရသော အခွန်များပေးဆောင်ရန်မလိုပေ။
တချို့သောI.C များသည် မိမိကိုယ်ပိုင်ငွေဖြင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံသော ပစ္စည်းကိရိယာ(Tools)တို့ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးကြသည်။ တချို့ ကိရိယာများသည် အလွန်တန်ဖိုးကြီးမားသည်။ သို့သော် ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ တန်ဖိုးကို ကြည့်ပြီး ထိုသူသည် I.C ဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ရန် မလုံလောက်သေးပါ။ ၄င်းအပြင် I.C များအနေဖြင့် ဝန်ထမ်းထက်စာလျှင် အလုပ်ရှင်မှ ပြန်မအမ်းသော မိမိအိတ်စိုက် လုပ်ငန်းသုံးစားရိတ်များ ပိုများပါသည်။ ထိုသို့သော အခြေအနေတွင် ထိုသူသည် ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု လုပ်ငန်းအတွက် မိမိအိတ်စိုက်ရငွေများသည် မိမိရသော ဝန်ဆောင်ခနှင့် မကာမိဘဲ အရှုံးပေါ်စေပါက ထိုသူကို I.C ဟုခေါ်နိုင်သည်။ I.C သည် ၄င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုကို လွတ်လပ်စွာ ကြော်ငြာနိုင်သည့်အပြင် အများပြည်သူကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။ ရုံးခန်းများနှင့်ဖွင့်နိုင်သည်။ I.C အနေဖြင့် ၄င်း၏ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ပုံသေဝန်ဆောင်ခသာရရှိပြီး ဝန်ထမ်းကဲ့သို့ပုံမှန်လစာ၊ တနာရီနှုန်းထား တပတ်နှုန်းထားနှင့် တခြားခံစားခွင့်များအတွက် အာမခံချက်မရှိပေ။ ထိုအချက်သည် အလွန်အရေးပါသော အချက်ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် မိမိလုပ်ငန်းတွင် အခကြေးငွေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော သူတို့အား မှန်ကန်စွာ ခွဲခြားဖော်ပြရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ထိုသို့ခွဲခြားရန် အခက်အခဲရှိပါက Form SS8 ကိုဖြည့်စွက်ပြီး IRS သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
I.C ဆိုပါက 1099.Mis Form နှစ်ကုန်လျှင်ထုတ်ပြီး ထိုသူ၏တနှစ်စာ ဝန်ဆောင်ခကို ဖော်ပြရပါမည်။ ဝန်ထမ်းဆိုပါက W2 Form ဖြင့် ၄င်း၏စုစုပေါင်းလစာနှင့် ထိန်းသိမ်းထားသော အခွန်များ ဖော်ပြရန် အလုပ်ရှင်တွင် တာဝန်ရှ်ိပါသည်။
အသေးစိတ်သိလိုပါက www.irs.gov/independent contractor ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ မေးခွန်းများမေးမြန်းလိုပါက(916)3884826(သို့) hlwin87@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Licensed Tax Preparer (H&J Tax Services)
ဤ post ကို တာဝန်ယူ ရေးပေးသော အဖွဲ့ဝင် ကိုရဲမင်းဦး မိသားစု အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Than Naing October 6, 2012 at 3:23 pm Reply
Thanks for good post and good people.
Hnin Lwin October 4, 2012 at 1:40 am Reply
Replay to Chann:
First of all your information doesn’t give meacomplete picture but my assumption is you employe foracorporation you own. If this is correct, you are doing right.
Corporate officers are employees of the corporation. Thus they are w2 employees. This is what exactly you suppose to do according to corporation guideline.
Corporate officers (or ) owner who do not pay reasonable salary for themselves are violating one of the corporation’s guidelines and will likely be penalized.
If my assumption is not correct, please feel free to send me an email with more information then I’ll be able to answer more precisely and correctly. Thanks
my email is hnjtax@yahoo or hlwin87@gmail.com
Chann October 3, 2012 at 3:03 pm Reply
How can you explain If I have w2 and I have corp (EIN)?
Administrator October 4, 2012 at 12:01 am Reply
Hi, your question is being forwarded to Ma Hnin Lwin. (hlwin87@gmail.com)
Hnin Lwin October 4, 2012 at 1:46 am Reply
Ko Htun Linn Latt
Thank you very much. From now on I’ll try my best to type Burmese font to avoid giving you or whoever helping you ( I think Ko Ye Min Oo) extra job during your busy schedule.
Thanks Ko Ye Min Oo and family.
ဤ post ကို တာဝန်ယူ ရေးပေးသော အဖွဲ့ဝင် ကိုရဲမင်းဦး မိသားစု အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ( I just copy from the web)
Hnin Lwin October 5, 2012 at 9:25 pm Reply
Hi Chann: I am so sorry for not replying earlier. I thought I have answered your question. But I think due to computer glitch it didn’t show up on the web.
First of all your info didn’t provide meacomplete picture. But my assumption is you employe the corporation you own.
If my assumption is right, you suppose to be paying salary to yourself because you are an employee of the corporation you own. In other word as you said you are w2 employee of the corporation. That is what you exactly have to do.
According to corporation guide lines every corporate officer must pay reasonable salary to themselves otherwise it isaviolation and likely to be penalized.
What I mean by violation is that
1- you work foracorporation for free ( IRS said it is nonsense)
2- you are avoiding payroll tax ( FUTA / SUTA /FICA)
I hope it answered your question. If not please feel free to send me an email or call me at hnjtax@yahoo.com or hlwin87@gmail.com. My contact number is (916) 3884826. Thanks….
LeaveaReply to Hnin Lwin Cancel reply